Cinezela iifoto- Cinezela jpg ezininzi kwi-intanethi / ngaphandle kweintanethi
Isinxibelelanisi soMfanekiso esiPhambili
Yenza ubungakanani bomfanekiso kunye nomgangatho womfanekiso ngaphandle kweintanethi nakwi-Intanethi usebenzisa isiguquli somfanekiso se-jpg esiphakamileyo.
*Unokongeza imifanekiso eli-10 ukucinezela.
Ungayicinezela njani imifanekiso?
Cofa Yongeza ifayile ukongeza iifayile. Unokongeza iifayile ezingenamda.
Cofa u Qalisa ukucinezela ukuqala i-compression algorithm ukunciphisa ubungakanani bomfanekiso olayishiwe. Cofa Rhoxisa ukumisa.
Cofa u Khuphela ukukhuphela i-jpeg yakho / uxinzelelo lwe-png okanye umfanekiso ocinezelweyo okanye iifoto.
Unokucinezela JPG, GIF, PNG ngomgangatho ophezulu. Ukunciphisa ubungakanani beJPG, GIF, kunye nePNG kwindawo enye.
Usebenza njani uxinzelelo lomfanekiso?
Iifoto zakho ze-smartphone zithatha indawo yokugcina kakhulu. Nantsi indlela esinokuthi sibanciphise ngayo.
Esi sicelo sinciphisa ubungakanani bemifanekiso ngokuhlalutya i-pixel nganye. Ngovavanyo lwethu, ukunciphisa ubungakanani befayile kwimifanekiso esemgangathweni kwahlala phakathi kwe-20% kunye ne-85%. Isicinezeli somfanekiso yinkqubo yokucinezela kunye nokukhulisa iifoto zedijithali, kunye nokunyamekela ngokukhethekileyo iifoto zakho zedijithali ukukhusela umgangatho wakho wemifanekiso yokwenyani. Iicompressors zethu zibandakanya ngokukodwa iinjini ezilahlekileyo zokufota kunye neetekhnoloji.
Nanku umzekelo wendlela esi sicelo esiya kukuvumela ngayo ukunciphisa ubungakanani bemifanekiso.
Lo ngumzekelo nje womfanekiso wokubonisa ukuba ingakanani imifanekiso yakho ephuculweyo.
compress yefoto sisicelo sewebhu sokuqala esingaxhunyiwe kwi-intanethi.
Cinezela iifoto kwi-intanethi kwaye ngaphandle kweintanethi sisicelo esincinci kwaye esinamandla sokucinezelwa komfanekiso. Isicelo siya kukuvumela ukuba ucinezele imifanekiso kwiifoto ezincinci ezinobungakanani kunye nokulahleka komgangatho okanye ukusebenzisa ilahleko. Unokufaka usetyenziso kwisixhobo sakho kwaye ulisebenzise ngaphandle kweintanethi. Ungasifaka esi sicelo kwizixhobo zakho zeWindows / ze-Android / ze-Apple / zeLinux. Esi sicelo sisicelo sasimahla ekungafuneki ukuba uhlawule naluphi na uhlobo lwemirhumo. Ukucinezela imifanekiso yakho kunye nesicelo sethu yindlela elula yokuqinisekisa ukuba imifanekiso yakho ilula, iyalayisha ngokukhawuleza kwaye ilungile kwimveliso. Uyicofa njani yonke imifanekiso kwiPowerPoint presentation. Isicelo sethu sokulungisa umfanekiso sinokukunceda ukuba uguqule i-jpg yefayile ye-compressor ekwi-intanethi simahla okanye ubungakanani bayo kwakhona okanye ukunciphisa ubungakanani be-jpg.
Ukhuphelo olungaphezulu kwesigidi esinye, usetyenziso lokucinezelwa yenye yezona software zaziwayo zokufezekisa imifanekiso ezikhoyo kwi-intanethi okanye kwi-intanethi. Sinceda izigidi zabafoti, iibhlog, ii-webmasters, amashishini, okanye abasebenzisi abaqhelekileyo ekugcineni, ukuthumela kunye nokwabelana ngemifanekiso yedijithali. Ukusetyenziswa kwesicelo kunye nokufaka kwakhona imifanekiso ngokufanelekileyo, ukuyivumela ukuba yenze iifayile zomfanekiso ngaphandle kokutshintsha isisombululo okanye ilahleko kumgangatho. Sizama ukusebenzisa i-AI ukunciphisa ubungakanani bomfanekiso, njengakwisilicon Valley ye-HBO. Le app iyakwenza ukuba imifanekiso yakho ikhawuleze ilayishwe kunxibelelwano lwe-intanethi olucothayo.